Maka: umngcipheko | Martech Zone
Lwesine, Okthobha 22, 2015 NgoLwesihlanu, Oktobha 23, 2015 Douglas Karr
Intengiso yedijithali iya kuba yeyona nkcitho iphambili kwintengiso yemithombo yeendaba ngo-2016 ngokweComScore. Ikwayenza nokuba ibe yinto ekungenakuphikiswa kuyo ekucofeni ubuqhetseba. Ngapha koko, ngokwengxelo entsha ngobuqhetseba kumzi-mveliso wentengiso kwi-Intanethi, isinye kwisithathu sayo yonke inkcitho yentengiso iya kuchithwa ngobuqhetseba. Distil Networks kunye ne-Interactive Advertising Bureau (IAB) bakhuphe isiKhokelo soMshicileli sedijithali sokuMlinganisa kunye nokuNcitshiswa kweTra Traffic, ingxelo evavanya le yanamhlanje
NgoLwesine, Julayi 28, 2005 NgoMgqibelo, Oktobha 18, 2014 Douglas Karr
Kwakukho abantu kwilizwe liphela abaphefumla ukukhululeka ekuboneni iShuttle Discovery isungula ngempumelelo. Kukho abo bakholelwa ukuba iibhiliyoni zeedola ezichithwe kwinkqubo yasemajukujukwini yinkcitho enkulu yemali. Andinakuphikisa ngakumbi. Njengakolu phehlelelo lwamva nje, ukuseta iinjongo ekunzima ukuzifikelela zezona zisishukumisela kuphuhliso nakwinkqubela phambili. Inkqubo yendawo yenye yeenkqubo ezithi